Home » Horizon Mma » 2015 Horizon Day Veteran's Day Sale Valid til 11 / 11 / 15
Ụbọchị 2015 Veteran Day Sale
Ụlọ ahịa ma chekwaa ruo $ 400 kwụsịrị mmega igwekota na ruo $ 600 kwụsịrị Horizon / Ọhụụ ellipticals na footmills na 2015 Horizon Fitness Veteran's Day Sale! Ụlọ ahịa n'etiti 11 / 2 / 15 na 11 / 11 / 15 ma chekwaa:
$ 350 si na T101 Treadmill
$ 400 kwụsịrị na 5 Treadmill Adventure
$ 600 si na T9 Treadmill
$ 350 wepụ EX-59 Elliptical
$ 400 si na 3 Elliptical Evolve
$ 400 si na 5 Elliptical Evolve
$ 600 si na Elite E7 Elliptical
$ 600 si na Elite E9 Elliptical
$ 300 kwụsịrị Nkasi Obi U
$ 200 si Nkasi Obi R
$ 300 si na Elite R7
$ 400 si na U7
$ 400 si na Elite IC7
Pịa N'okpuru ebe a ịzụta Ahịa azu ahia. Kwesịrị Jiri Usoro Epekpe Ọpụpụ iji chekwaa na ụbọchị 2015 Horizon Fitness Veteran Day Sale
Pịa ebe a iji zụọ ụbọchị ọhụụ ndị ahịa na Horizon Fitness! Ụlọ ahịa ma chekwaa mpempe akwụkwọ ihe eji eme njem $ 400 ma ruo $ 600 na ellipticals na ihe ndị a na-agbagharị! Usoro Deeti: Ọpụpụ
Ihe ngosi a na-egosi nke a: The Horizon T101 Treadmill
Zọpụta Price 350 Off Price! Ugbu a Naanị $ 649.99! Na-agụnye Okpokoro Ndụ na Ntugharị Mmanya Gụnyere FREE Mbupu!
Ụbọchị Ọhụụ na-ere na Horizon Fitness! Zọpụta $ 350 na T101 Treadmill - Ugbu a Naanị $ 649.99! Ndụ Okpokoro na Mgbochi Ntugharị na Mbupu Mbupu!
November 3, 2015 Admin Horizon Mma Enweghị asịsa